လေယာဉ်ခရီးစဉ် Factor အဲယားဘတ်စ် A350-900 XWB
မေးခွန်း လေယာဉ်ခရီးစဉ် Factor အဲယားဘတ်စ် A350-900 XWB
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #303 by Colonelwing
ဒါဟာတကယ့်ကောင်းတဲ့ပုံပေါ်သောအရာကိုရှာဖွေနေနှင့်ကောင်းစွာ payware mode မှာ A350 ပြုသောသူတို့အဘို့။
ငါထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအလျှင်းမသိရပါ dont ,, ဒါပေမယ့်ငါပြန်လည်သုံးသပ်ဖတ်ခဲ့ဘူးပါပြီအဘယျသို့ကနေ ,, ဒါကြောင့်အကြီးအကြည့်ပါတယ်။
ငါထုတ်ကုန်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမနီးစပ်စပ်လျဉ်းရှိသည်အဖြစ်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု ,, အထက်တွင်ဖော်ပြရမည်။
ဒါကြောင့် Gentelmen လုပ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ ,, တစ်ယောက်ယောက်အတွက်ဖြည့်စွက်နိုင်ပြီးပိုကအကြောင်းပြောဆို ...
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #304 by Dariussssss
ဒီတစ်ခုနှင့်တူလေယာဉ် P3D နဲ့ X-လေယာဉ်ကဲ့သို့သောအခြားဆင်းမ်များ, အဘို့အသွားစေပါလိမ့်မယ် ....
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #315 by JanneAir15
ဒါဟာငါထင်ကောင်းတဲ့ကိုကြည့်နဲ့ကျွန်မဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကောင်းတစ်ဦး A350 အတွက်လည်းရှာဖွေနေခဲ့သည်ငါသည်ဤတဒါပေမယ့်လည်းကောင်းတစ်ဦး A380 ရှာနေတာထင်ရနိုင်ပေ။ သငျသညျလညျးအ liveries add နိုင်စွမ်းနဲ့ကောငျးတဲ့အဲယားဘတ်စ် A380 ကိုသိကြပါလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုအကြံပြုကျေးဇူးပြုပြီးမပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ ငါ "လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ" ဟုခေါ်နေတဲ့ခေါင်းစဉ် created ဒါကြောင့်သင် A380 တစ်အကြံပြုချက်ရှိပါက ကျေးဇူးပြု. ပြောပြပါတယ်။
2 နှစ်ပေါင်း2months ago -2နှစ်ပေါင်း2months ago #321 by Colonelwing
nice ရွေးချယ်မှုကြောင့်အဲယားဘတ်စ် A350-900 XWB ယန္နေ ,, ကြောင့် XPlane အဘို့နှင့်မသေး FSX အဘို့ဖြစ်၏သတိရ
ရုံသင်ရှိသည်သေချာ befort ဝယ်ယူစေ XPlane Sim ...
အဘယ်သူမျှလျော့နည်းဈကတစ်ခုတည်းရုံးစွမ်းဆောင်ရည်စာရွက်စာတမ်းသေးပြန်လွတ်လာပင်မပါဘဲလေယာဉ် Factor ကဆွဲထုတ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲနဲ့ X-လေယာဉ်များအတွက်ဿုံယုံကြည် A350 ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းထူးခြားတဲ့င်ထင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤ aicraft ၏နောက်မွမ်းမံမှုများအတွက်မျှော်လင့်တယ်။ အဘယ်သို့ငါတစ်နှစ်အတွက် FSX / P3D အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအဲယားဘတ်စ် A350 ပျံသန်းနိုင်ပါလိမ့်မည်တွေးမိ။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း2months ago နေဖြင့် Colonelwing.
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #323 by JanneAir15
ဟလို! ငါ FSX ရှိသည်ကြောင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ပေမယ် FSX အဘို့ဖြစ်သော Aerosoft အားဖြင့် A350 ရှိသေး၏။
စကားမစပ်ငါ့နာမကိုယန္နေ (မ Jeanne) ဖြစ်ပါသည်နဲ့ကျွန်မတစ်ဦးအမျိုးသမီးတွေဘူး!
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #324 by Colonelwing
ဒါကြောင့်တောင်းပန်ပါတယ် ,, သတင်းအချက်အလက်တညျ့ပြီ ...
0.262 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်